Nafenina tao anaty… paty : tratra ilay Tanzanianina nanao trafikana “héroïne” | NewsMada
Nafenina tao anaty… paty : tratra ilay Tanzanianina nanao trafikana “héroïne”
Saron’ny zandary, teny Talatamaty ny asabotsy teo, na nezahina nafenina tao anaty baoritra nisy paty aza, ny zava-mahadomelina ”heroïne” milanja iray kilao. Teratany tanzanianina iray no tompon’antoka amin’izao trafika izao.
Takisborosy iray voasakan’ny zandary teny Mahitsy ny asabotsy teo tokony ho tamin’ny 5 ora hariva. Tratra tao anatin’ity fiara ity ny héroïne milanja 1 kilao, ary Tanzanianina iray sy ny saofera ary vehivavy iray nosamborina. Araka ny fanazavan’ny zandary, nisy olona roa ka ny iray, Tanzanianina nandefa “colis” tamin’io fiara io teo Talatamaty hoentina any Antsiranana ka paty (nouille) no noteneniny ho ao anatin’ilay entana. Nisy zandary anefa nahafantatra io trafika io ka nampandre ny borigady Mahitsy izay nanakana ny fiara ka tratra tao ilay “colis”. Nahitana héroïne nilanja 1 kilao tao ka nalaina ary notanana ilay mpamily. Nanafatra mpamily hafa ny kaoperativa nitondra ny fiara ho any Antsiranana.
Ny alahady no voasakan’ny zandary teny Ivato efa saika hivoaka ny Nosy ilay Tanzanianina ka natao andrimaso hanaovana famotorana. Ny alahady teo ihany koa, voasambotry ny zandary any Antsiranana ny olona saika hitsena ilay entana izay vehivavy ka nalefa aty Antananarivo natao famotorana izy io. Natolotra ny fampanoavana, omaly teny Anosy, izy ireo ka naverin’ny tonian’ny mpampanoa lalàna eny amin’ny zandary satria mbola misy fanadihadiana lalindalina kokoa nampanaoviny.
“Mandeha ny fanadihadiana amin’izao momba ireo mpanao trafika ireo. Efa am-pelatanan’ny zandary ny raharaha rehetra mahakasika izany”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny zandary Imerina Afovoany, ny lietna Ramanandraibe Rija.
Hatramin’izany, tany amin’ny Nosy Maorisy no tena nahatrarana ity karazana zava-mahadomelina ity, izay avy aty amintsika. Maro ny Malagasy efa tratra tamin’izany, ary vehivavy ny ankamaroany, migadra any an-toerana. Efa miparitaka eto amintsika koa izy io, saingy mbola niafinafina hatramin’izay. Tamin’ity indray mitoraka ity, tena lehibe ity tratra ity, izay mitentina 300 tapitrisa Ar ny vidiny. Tena manjifa azy ireo teratany vahiny eto amintsika, kanefa fantatra fa efa misy koa ny Malagasy mandray azy. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana ataon’ny zandary, satria mety efa maro io zava-mahadomelina io eto amintsika, ary izay mety ho atidoha mpampiditra sy mpanondrana azy.